ဗုဒ္ဓေါ... ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး SENTOSA ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားပါလိမ့်တဲ့...
သြော်... မောင်လူအေး ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဖိုတိုရှော့လိုက်တာ နေမှာပါတဲ့.... ပြောင်းပြန် လှန်လိုက်တာ နေမှာပါတဲ့...
အဲ... ဒါပေမဲ့ ညာဖက် တိုင်နားက SLOW ဆိုင်းဘုတ်ကျတော့လည်း အတည့်ပါဟ တဲ့....
ပုံလေး ကြည့်ရင်း တွေးမိတာလေးတွေ ပြောပါတယ်...
အာ... ငါတွေးတာ... ဘယ်လိုလုပ် သိနေပါလိမ့်တဲ့... ပြုံးတယ်... ပြုံးတယ်...
ခင်ဗျား ရွှီးတာ သိသားပဲတဲ့... ကျုပ် ခင်ဗျား ပြောသလို မတွေးမိပါဘူးတဲ့...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညာဖို့ ကြိုးစားတယ် ... မဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့... :)
ဆန်တိုစာ သွားတဲ့ လမ်းပေါ်က ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို ဆန်တိုစာဖက်က အပြန် ရိုက်ထားတာပါဗျာ...
ဘယ်လို ဖြစ်တယ် မသိ... တိုင်တွေက စောင်းနေတယ်...
ဓာတ်ပုံ ပညာရှင်များ ဝေဖန်ကြပါဦး... မောင်လူအေးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရိုက်ပြီး ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိတာ...
Filed Under : Photo, Singapore
Vivo ကနေ sky train စီးသွားရင် မြင်ရတဲ့ ဆောက်လက်စ IR ကို ကြည့်ရတာ သဘောအကျဆုံးပဲ အကိုရေ။ လုပ်ငန်းခွင်က ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာရောက်နေတယ်နော်။ နောက်နှစ်ပြီးမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား။
Sky Train ပေါ်ကနေ မြင်နေရတဲ့ IR က Resorts World Sentosa (RWS) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာ ဆောက်နေတဲ့ Integrated Resorts (IR) နှစ်ခုထဲက တစ်ခုပေါ့။ တစ်ခုက Marina Bay မှာ ဆောက်နေတဲ့ Marina Bay Sands ဖြစ်ပြီးတော့၊ နောက်တစ်ခုက ဒီ Resorts World Sentosa ပါ။
khmyt ပြောသလိုပဲ Site ရဲ့ Basement က ရေမျက်နှာပြင် အောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ Project တစ်ခုလုံးကို အပိုင်း လေးပိုင်းခွဲထားပြီးတော့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ၃ ခုက တာဝန်ယူ တည်ဆောက်နေပါတယ်။
အဲဒီ ၄ ပိုင်းထဲမှာ ၃ ပိုင်းက Casino လောင်းကစားဝိုင်းတွေ ပါတဲ့ Hotels တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ပိုင်းက Universal Studio Singapore (USS) ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ Sentosa အသွား ကားလမ်းဘေး၊ Monorail အောက်က Site က Universal Studio Singapore ပါ။
Project Dead Line က ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာလို့ သတ်မှတ်ထားပြီး၊ Target အမီ ပြီးနိုင်ဖို့ ၂၄ နာရီလုံး၊ နေ့မီး ညမီးနဲ့ ဆောက်နေပါတယ်။
၂၀၀၉ နှစ်ကုန်မှာ Project 100% မမီရင်တောင်၊ 90% လောက် လက်စသတ်နိုင်ပြီး Hotels နဲ့ Casino ကို လိုင်စင်ရအောင် လုပ်၊ ဖွင့်ပြီး ကျန်တာကို ဆက်လက်စသတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်မှန်းရပါတယ်ဗျာ။
အခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ အကို။
Feel free to visit my weblog; http://comunidad.aprendiendo.net.co/blog/view/9257/luxury-spain-property
idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for aboutayear and am
Also visit my weblog; www.rydbikes.com
my homepage http://www.smart-links.org/members/dakotaburns1972/activity/22087/
There are some fascinating deadlines in this
article however I don’t know if I see all of them middle to
heart. There's some validity but I'll take hold opinion until I look into it
Here is my homepage ... theworkinplayground.com